Maxay tahay Maaliyadda xiddiga kooxda Real Madrid ee Luka Modric uu sheegay inuu meel gooni ah ku keydsan doono, maxaase ku qoran? – Gool FM
Maxay tahay Maaliyadda xiddiga kooxda Real Madrid ee Luka Modric uu sheegay inuu meel gooni ah ku keydsan doono, maxaase ku qoran?
Haaruun April 22, 2019
(Madrid) 22 Abriil 2019. Kulankii xalay ay Real Madrid 3-0 kaga badisay Athletic Bilbao ee Horyaalka Spain waxa uu ahaa kulan muhimad gaar ah u lahaa laacibka ugu fiican adduunka ee u dheela naadiga Real Madrid ee Luka Modric.
Ciyaartaasi ayaa ahayd tii 300 ee xiddiga xulka qaranka Croatia uu u saftay Real Madrid, waxaana Madaxweynaha naadiga Real Madrid ee FLorentino Pèrez uu Modric guddoonsiiyay funaanad ay dhabarka dambe kaga qornayd 300 & Magaca Modric.
Mar la weydiiyay su’aal ahayd dareenkiisa maadaama uu 300 ciyaarood uu u dheelay Real Madrid waxa uu Modric ku jawaabay: «Waxaan rajaynayaa in ugu yaraan 100 ciyaar oo kalena aan u sii ciyaaro Real Madrid, waayo kulan kasta oo aad Real u ciyaarto waxa uu leeyahay farxad gaar ah, funaanadaanna waxaan ku keydsan doonaa meel gooni ah».
Modric waxaa kale uu sheegay in Real Madrid uu ka helo waxyaabo badan oo aan laga helin naadiyada kale, isla markaana qofkii kooxdan ku soo biira uu ka dhismayo xagga shaqsi ahaaneed iyo xagga ciyaartooy ahaaneed labadaba.
Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Chelsea Vs Burnley
Kevin De Bruyne oo seegaya kulanka Manchester Derby ee dhexmari doona kooxaha Man United iyo Man City